Kupona kwekitsi hombe dzemu Africa: Nyanzvi dzemusango uye dzekushanya vanonetsekana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Kupona kwekitsi hombe dzemu Africa: Nyanzvi dzemusango uye dzekushanya vanonetsekana
tsika nemagariro • Hospitality Industry • nhau • Tanzania Breaking News • ushanyi • Trending Now • Akasiyana Nhau
Makatsi makuru eAfrica
Kucherekedza World Shumba Zuva mwedzi uno, kuchengetedzwa kwemhuka dzesango mu Africa kuri kunetsekana nezveramangwana reimwe yekatsi dzayo hombe dzemu Africa - shumba - kukondinendi iyi mushure mekuwedzera kwenhamba dzevapambi vari kutsvaga nhengo dzemiviri yavo. Mapoka ekuchengetedza mhuka dzesango nemasangano anoyamura muAfrica ari kushushikana nezviitiko zviri kuwedzera zvekuuraya shumba, kunyanya muWest Africa uko mhuka dzinozivikanwa dziri panjodzi huru, nepo poaching yakawedzera mudunhu rekumabvazuva nekumaodzanyemba kweAfrica.
Kukwidza kudiwa kwezvikamu zveshumba muSoutheast Asia kwawedzera hushori muAfrica.
Kupindira kwevanochengeta zvipfuyo mumapaki ekuchengetedza mhuka dzesango kusvika parizvino kwakonzera kusawirirana pakati pevachengeti vezvipfuyo vanongofamba-famba.
Izvi zviri kuendesa kuuraya kweshumba nekuisa chepfu, kupfura nemapfumo, uye nemiseve ine chepfu.
“Zviitiko zvakakwirira zve shumba ine chepfu inonziwo kuEast Africa nzanga dzinotama dzichidzorera mushure mekurwiswa kwezvipfuyo zvavo, ”akadaro Edith Kabesiime, maneja weWildlife Campaigns kuOffice yeAfrica Animal Protection kuKenya.
Zvitsuwa Zvitsvene - Ngorongoro Crater Camp
Akataura kuti kudiwa kwezvigadzirwa zveshumba, semabhonzo nemeno, muindasitiri yemishonga yemakwenzi inokurumidza kukura kwakasimudzira humbavha hwavo musango reAfrica.
Kabesiime akataura kuti kumwe kutyisidzira kweshumba yemu Africa kunosanganisira kubereka nhapwa nekuvhima mukombe.
Huwandu hwevanhu veshumba vemuAfrica vanofungidzirwa kunge vakadzikira neanosvika makumi mashanu muzana pamakore makumi maviri nemashanu apfuura. Nyanzvi dzekuchengetedza dzakati pane tyisidziro chaiyo pakupona kweshumba kubva pakurasikirwa nenzvimbo, kutambudzwa kubva mukukonana kwevanhu, uye kukura kwekutengeserana kusiri pamutemo kwenzvimbo dzeshumba.
"Shumba dzinoumba chikamu chakakosha chezvinhu zvipenyu nemasikirwo azvo, uye chiitiko ichi chinobatsira kwete kungozivisa vanhu nezvedambudziko ravo asiwo kupenyesa budiriro zhinji dzatinoda kuti tiwedzere kuchengetedza kwavo mune ramangwana," Kenyan Tourism Gurukota VaNajib Balala vakadaro.
Huwandu kubva kuWorld Animal Protection hunoratidza kuti shumba yevagari vemuAfrica parizvino inofungidzirwa kuva zviuru makumi maviri, zvichidzika kubva pashumba dzinosvika mazana maviri ezviuru makore zana apfuura.
South Africa ndiyo yega nyika inobvumidza kubereka kukuru kweshumba, uko mhuka dzinowanzo chengetwa mumakeji akazara kana zvivharo.
Kuuraya shumba pamapfupa avo uye zvimwe zvikamu zvakabuda sekutyisidzira kwazvino. Kunyangwe hazvo mapfupa eshumba asiri chikamu chemushonga wechiChinese, sezvo huwandu hwengwe hunodzikira, izvi zvigadzirwa zviri kuwanikwa zviri nyore zviri kupinda mumisika yemhuka dzesango zvisiri pamutemo.
Shumba ndiyo mhuka inotungamira uye inokwezva yevashanyi, ichidhonza mapoka makuru evashanyi pa safari kuEast Africa.